Maxaa ka soo kordhay doonistii Kooxda Manchester United ee Weeraryahanka Borussia Dortmund, Jadon Sancho? – Gool FM
(Dortmund) 08 Agoosto 2020. War cusub ayaa ka soo kordhacay doonistii ay Manchester United ku doonaysay inay kula soo saxiixato Weeraryahanka Kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Kooxda reer Jarmal ayaa la soo warinayaa inay Man United u sheegtay inay bixiso lacagaha ay ku dalbanayso ciyaaryahankan reer England, haddii kale ay Sancho hordhigayaan heshiis kordhin cusub.
Borussia Dortmund ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay dalab heshiis kordhin ah hordhigto Jadon Sancho, kaasoo sare loogu qaadi doono mushaharkiisa sida ay warinayo Wargeyska Bild ee ka soo baxda Jarmalka.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Manchester United ay ciyaaryahan aad u doonaysay saxiixiisa uu waqtigu ku yar yahay, waxaana ay haysataa illaa Isniinta todobaadkaan.
Kooxda reer England ayaa haysata illaa maalinta Isniinta ah ee soo aaddan si ay u gabagabayso heshiiska Sancho, iyadoo looga fadhiyo inay miiska saarto 120 milyan oo euro, halka Borussia Dortmund ay diyaar u tahay inay hordhigto xiddigeeda heshiis kordhin cusub.
Aubameyang oo ku guuleystay xiddiga xilli ciyaareedka ugu fiicanaa Kooxda Arsenal... (Yuu ku garaacay abaal-marintan?)